Ithegi: kwimidiya yoluntu infographic | Martech Zone
Ithegi: kwimidiya yoluntu infographic
Njengoko abathengisi kunye namaqonga eendaba ezentlalo bekhula, sifumana okuninzi malunga nokuchasana kunye nokuphazamiseka kokutyala imali kwimidiya yoluntu. Uya kubona ukuba ndihlala ndigxeka okulindelweyo ngabacebisi beendaba zosasazo- kodwa oko akuthethi ukuba ndigxeka imidiya yoluntu. Ndigcina iitoni zexesha kunye nomzamo ngokwabelana ngobulumko noontanga kunye nokuthetha ngeemveliso ezikwi-Intanethi. Andithandabuzi ukuba ixesha lam endilichithe kwimidiya yoluntu linayo
Abathengisi kuye kwafuneka batshintshe phantse zonke iinkalo zeendlela zabo zentengiso ukuze baqhubeke nokuziphatha kwabathengi kunye neendlela zetekhnoloji. Le infographic, indlela iMedia Media etshintshe ngayo uMdlalo weNtengiso ovela kwiNtengiso ye-MDG, ibonelela ngezinye zezinto eziphambili zokuqhuba kunye nefuthe lotshintsho kwintengiso yemidiya yoluntu. Xa intengiso yemidiya yoluntu yafika kuqala kwindawo yentengiso, abathengisi bayisebenzisa ukunxibelelana nabaphulaphuli babo. Nangona kunjalo, abathengisi banamhlanje kuye kwafuneka batshintshe uninzi
Sabelane ngeenkcukacha-manani malunga nokukhula kwenkonzo yabathengi sisebenzisa imithombo yeendaba zentlalo, kwaye le infographic iyithatha kancinci, inika amaqhosha ama-6 ahlukeneyo enkampani yakho ukuba ayibandakanye ukuqinisekisa impumelelo. Ukunyamekela inkonzo yabathengi kunokuphazamisa ukuthengisa kwakho, ngoko ke kubalulekile ukuba abathengisi bajonge imvakalelo kunye nexesha lokuphendula ngokusebenzisa imidiya yoluntu. Kuphononongo olunye lwe-JD lwamandla ngaphezulu kwe-23,000 yabasebenzisi be-Intanethi, i-67% yabaphenduli baxele ukuba banxibelelana nenkampani ngeendaba zosasazo